DWG Fitaovana fanarenana. Rindrambaiko fanarenana sy fanarenana AutoCAD.
DataNumen DWG Recovery dia ny tsara indrindra AutoCAD DWG fitaovana fanamboarana sy fanarenana eto amin'izao tontolo izao. Izy io dia afaka manamboatra ny AutoCAD simba DWG manaova rakitra ary araraoty araka izay tratra ny angon-drakitrao, amin'izay hampihena ny fatiantoka ao amin'ny kolikoly fisie.
4.90 / 5 (avy amin'ny vato 1,647)
Nahoana DataNumen DWG Recovery?
Ny tahan'ny fanarenana dia ny most mason-tsivana lehibe a DWG vokatra fanarenana. Miorina amin'ny fitsapana feno nataonay, DataNumen DWG Recovery manana ny tahan'ny fanarenana tsara indrindra, tsara lavitra noho ny mpifaninana hafa rehetra eny an-tsena!
Mianara bebe kokoa momba ny fomba DataNumen DWG Recovery mifoka ny fifaninanana
Vahaolana amin'ny fanarahana ny lesoka AutoCAD noho ny kolikoly DWG raki-daza
Vahaolana "Eritreritra tsy manankery dia tsy mety" Error
Vahaolana "Error anatiny !dbqspace.h@410: Error eOutOfRange"
Vahaolana ho an'ny "Non Autodesk DWG”Hadisoana
Endri-javatra lehibe ao DataNumen DWG Recovery v3.0
Tohano hanarenana ny AutoCAD R14 ka hatramin'ny 2021 DWG raki-daza.
Tohano hamerenana ireto zavatra manaraka ireto ao DWG fisie: BLOCK, POINT, LINE, ARC, CIRCLE, ELLIPSE, SPLINE, XLINE, RAY, SOLID, 3DFACE, LWPOLYLINE, POLYLINE (2D), POLYLINE (3D), POLYLINE (PFACE), POLYLINE (MESH), VERTEX (2D) , VERTEX (3D), VERTEX (MESH), VERTEX (PFACE), VERTEX (PFACE FACE), TEXT, MTEXT, TRACE, ATTRIB, ATTDEF, ENDBLK, SEQEND, INSERT, DIMENSION (ORDINATE), DIMENSION (LINEAR), DIMENSION (LINEAR) ALIGNED), DIMENSION (ANG 3-Pt), DIMENSION (ANG 2-Ln), DIMENSION (RADIUS), DIMENSION (DIAMETER), LEADER, TOLERANCE, BLOCK CONTROL OBJ, BLOCK HEADER, LAYER CONTROL OBJ, LAYER, STYLE CONTROL OBJ, STYLE, LTYPE CONTROL OBJ, LTYPE, TOJY CONTROL OBJ, VIEW, UCS CONTROL OBJ, UCS, VPORT CONTROL OBJ, VPORT, APPID CONTROL OBJ, APPID, DIMSTYLE CONTROL OBJ, DIMSTYLE.
Fanohanana hahazoana sitrana lost & nahita zavatra tao DWG raki-daza.
Tohano hamerenana ireo zavatra voafafa ao DWG raki-daza.
Fanohanana mba ho sitrana DWG sary avy amin'ny temporary fisie rehefa misy ny voina data.
Fanohanana ny famoahana rakitra ao anaty DWG endrika sy endrika DXF.
Fanohanana ny famoahana rakitra tsy miova ao anaty endrika AutoCAD R14 ka hatramin'ny 2017.
Fanohanana amin'ny fanamboarana DWG fisie amin'ny media maloto, toy ny floppy disk, Zip kapila, CDROM, sns.
Fanohanana hanamboarana andiany iray DWG raki-daza.
Tohano hahitana sy hisafidy ny DWG rakitra tokony hamboarina amin'ny solosaina eo an-toerana.
Tohano ny fidirana amin'ny Windows Explorer, amin'izay ianao afaka manamboatra AutoCAD DWG manaova rakitra miaraka amin'ny menio misy ny Windows Explorer.
mampiasa DataNumen DWG Recovery hamerina AutoCAD manimba DWG Files
Rehefa ny AutoCAD anao DWG simba na simba ny fisie ary tsy azonao atao ny manokatra azy ireo mahazatra, azonao ampiasaina DataNumen DWG Recovery hijerena ny DWG manaova rakitra ary alao angona betsaka araka izay azo atao avy amin'izy ireo.
Fanamarihana: Alohan'ny hamerenana izay simba na simba dwg raki-daza miaraka DataNumen DWG Recovery, azafady manakatona ireo rindranasa hafa mety manova ny dwg raki-daza.
Safidio ny simba na simba dwg rakitra haverina:
Azonao atao ny mampiditra ny dwg anaran'ny rakitra mivantana na kitiho ny
bokotra hijerena sy hisafidianana ilay rakitra. Azonao atao koa ny manindry ny
bokotra hahitana ny dwg rakitra ho haverina amin'ny solosaina eo an-toerana.
Raha fantatrao fa simba ny endrik'ilay loharano DWG rakitra, avy eo azonao atao ny mamaritra azy ao anaty boaty combo:
Raha atao default dia napetraka amin'ny "Auto Determined", izay midika DataNumen DWG Recovery hamakafaka sy hamaritra ho azy ny endriny.
Ireto misy endrika manaraka ireto dia tohanan'ny loharano DWG raki-daza:
AutoCAD 2013-2017 DWG endrika
AutoCAD 2010-2012 DWG endrika
AutoCAD 2007-2009 DWG endrika
AutoCAD 2004-2006 DWG endrika
AutoCAD 2000-2003 DWG endrika
AutoCAD R14 DWG endrika
Default (nitranga in- DataNumen DWG Recovery hamonjy ny raikitra dwg ataovy ao anaty rakitra vaovao antsoina hoe xxxx_fixed.dwg, izay xxxx no anaran'ilay loharano dwg rakitra. Ohatra, ho an'ny loharano dwg rakitra Simba.dwg, ny anarana default ho an'ny fisie raikitra dia ho Damaged_fixed.dwg. Raha te hampiasa anarana hafa ianao dia azafady mifidy na apetraho mifanaraka amin'izany:
Raha manana ny rakitra napetraka.DWG fanitarana, avy eo DataNumen DWG Recovery hamoaka izany ao DWG endrika.
Raha toa ka manana extension .DXF ny rakitra efa napetraka, dia DataNumen DWG Recovery hamoaka azy amin'ny endrika DXF.
Azonao atao ny manondro ny endrika fisie napetraka ao amin'ny boaty combo:
Amin'ny toerana misy anao, raha tsy faritoinao ny endrika fisie output dia avy eo DataNumen DWG Recovery hampiasa ny endrika mitovy amin'ilay loharano DWG hametraka.
Ireto misy endrika famoahana manaraka ireto dia manohana:
bokotra, ary DataNumen DWG Recovery start scanning ary avereno ny loharano dwg rakitra. Bara fandrosoana
dia hanondro ny fandrosoana fanarenana.
Aorian'ny fizotry ny fanarenana, raha ny loharano dwg Azo sitrana soa aman-tsara ny fisie, ho hitanao boaty hafatra toy izao:
Azonao atao izao ny manokatra ny raikitra dwg apetraho amin'ny AutoCAD na hafa dwg Asa vaventy.
DataNumen DWG Recovery Navoaka tamin'ny 3.0 Mey 3 ny 2021
DataNumen DWG Recovery 2.1 dia navoaka tamin'ny 16 Desambra 2020
DataNumen DWG Recovery Navoaka tamin'ny 1.9 Novambra 4 ny 2020
DataNumen DWG Recovery 1.8 dia navoaka tamin'ny 30 Jona 2020
Tohano hanarenana ny AutoCAD 2018 ka hatramin'ny 2021 DWG raki-daza.
DataNumen DWG Recovery Navoaka tamin'ny 1.7 Novambra 19 ny 2019
DataNumen DWG Recovery Navoaka tamin'ny 1.6 aprily 19 ny 2018
Tohano hanarenana ny AutoCAD 2015 ka hatramin'ny 2017 DWG raki-daza.
DataNumen DWG Recovery 1.5 dia navoaka tamin'ny 29 Mey 2014
Tohano hanarenana ny AutoCAD R14 ka hatramin'ny 2003 DWG raki-daza.
DataNumen DWG Recovery 1.1 dia navoaka tamin'ny 31 martsa 2014
Tohano hanarenana ny AutoCAD 2004 ka hatramin'ny 2006 DWG raki-daza.
DataNumen DWG Recovery 1.0 dia navoaka tamin'ny 7 Janoary 2014
Tohano hanarenana ny AutoCAD 2010 ka hatramin'ny 2014 DWG raki-daza.
Tohano hamerenana ireto zavatra manaraka ireto ao DWG fisie: BLOCK, POINT, LINE, ARC, CIRCLE, ELLIPSE, SPLINE, XLINE, RAY, SOLID, 3DFACE, LWPOLYLINE, POLYLINE (2D), POLYLINE (3D), POLYLINE (PFACE), POLYLINE (MESH), VERTEX (2D) , VERTEX (3D), VERTEX (MESH), VERTEX (PFACE), VERTEX (PFACE FACE), TEXT, MTEXT, TRACE, ATTRIB, ATTDEF, ENDBLK, SEQEND, INSERT, DIMENSION (ORDINATE), DIMENSION (LINEAR), DIMENSION (LINEAR) ALIGNED), DIMENSION (ANG 3-Pt), DIMENSION (ANG 2-Ln), DIMENSION (RADIUS), DIMENSION (DIAMETER), LEADER, TOLERANCE, BLOCK CONTROL OBJ, BLOCK HEADER, LAYER CONTROL OBJ, LAYER, STYLE CONTROL OBJ, STYLE, LTYPE CONTROL OBJ, LTYPE, TOERANA OBJ OBOLY, JIORA, UCS CONTROL OBJ, UCS, CONTROL OBJ, VPORT, OBID CONTROL OBJ, APPID, DIMSTYLE CONTROL OBJ, DIMSTYLE
Fanohanana ny famoahana rakitra ao anaty endrika AutoCAD R2.5, R2.6, R9, R10, R11, R12, R13, R14, 2000 ka hatramin'ny 2014.
Tohano ny fidirana amin'ny Windows Explorer, amin'izay ianao afaka manamboatra ny Outlook DWG manaova rakitra miaraka amin'ny menio misy ny Windows Explorer.
Fanamboarana sy sitrana sary Photoshop maloto (PSD, PDD) fisie.
Amboary sy avereno ny acrobat maloto PDF raki-daza.